बैंक कार्यालय को सीमा पार जो कोहीले, स्वतः ग्राहकको बन्नेछ। उहाँले उत्पादन को कुनै पनि प्रयोग गर्दैन भने पनि, कम से कम, एउटा प्रश्न सोध्न हुनेछ। र यो सल्लाह रूपमा प्रतिक्रिया कसरी, हदसम्म ट्यांक यसको भविष्य सम्बन्ध निर्भर हुनेछ। यो लगभग सबै वित्तीय संस्थाहरू ग्राहक प्रबन्धकहरू जसको काम बैंक हरेक ग्राहक आफ्नो समस्या को सुलझाने मा अधिकतम जानकारी सहायता प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ, देखा पर्न सुरु गरेको यस कारण लागि हो।
नियम, प्रत्येक आगमन गर्न दयालु उल्लेख र सबै यस प्यारा हँसिलो बालिका प्रकारको सहयोग गर्ने इच्छुकता देखाउँछन्। एक हात मा, स्थिति बुझ्न खोज्छ जो एक व्यक्तिको अगाडि हेर्न, यो सधैं सुखद छ। तर सम्पूर्ण निष्कपट आँखा र एक मिठाई मुस्कान विश्वास छैन। आखिर, धेरै संस्थाहरू मा ग्राहक प्रबन्धकको मुख्य कार्य प्रत्येक आगमन बाट बैंक को एक खडा ग्राहक पाएको छ।
कि कर्मचारी को काम हेरचाह गर्न छैन, र सेवाहरू, कार्यक्रम र अतिरिक्त सेवाहरू को बिक्री छ। यो कुनै पनि समस्या संभावना रूपमा चाँडै सम्भव र ग्राहकको लागि लाभदायक छैन रूपमा हल गरिनेछ बाहिर जान्छ, र तिनीहरूले सकेसम्म धेरै बैंकिङ सेवाहरू खरिद पर्छ भनेर। स्थानान्तरण लागि आए जो एक, पक्कै पनि "प्रस्ताव" प्लास्टिक कार्ड प्रयास गर्नेछ। म एक ऋण चाहिन्छ? त्यसपछि "लोड" बीमा स्कोर र उत्पादनहरु को एक जोडी। पनि एक सामान्य भुक्तानी कार्ड खोल्ने, व्यक्ति, बचत निक्षेप, क्रेडिट कार्ड र अरू केही मा हस्ताक्षर स्वैच्छिक-compulsorily बीमा हुन संभावना छ "सही।"
पक्कै, अलग लिएको यी उत्पादन, प्रत्येक, दिइएको अवस्थामा आवश्यक हुन सक्छ। तर यो सबै पोल बीमा गर्न, क्रेडिट कार्ड प्रदान र छुट्टी मा पैसा बचत गर्न हो कि होइन। दुर्भाग्यवश, धेरै संस्थाहरू मा अब यस्तो सम्बन्ध "ग्राहक - बैंक" छ। "Privatbank", उदाहरणका लागि यस सन्दर्भमा नेता मानिन्छ। यहाँ हामी सबै द्वारा क्रेडिट कार्ड, बैंक र बीमा हुनुपर्छ। अन्यथा, कुनै तरिका हो।
पहिलो कल भनेर उहाँले कार्ड खोल्न छैन भने, तपाईंले न स्थानान्तरण प्राप्त वा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो मा यो निराशा छ उपयोगिता। तर वास्तवमा यो छैन। यो हरेक कर्मचारी (कैशियर र व्यवस्थापकमा ग्राहक प्रबन्धक बाट) अधिकतम आउटरिच संग tasked छ भर्खरै हो बैंकिङ उत्पादनहरु। तथापि, ग्राहकहरु पहिले, यो कानुनी छ, र दोश्रो कुरा, यो आवश्यक छ, भनेर बुझ्न पर्छ। एक कार्ड र बिना पैसा आदान प्रदान गर्न प्राविधिक सम्भव छ जम्मा एक व्यक्ति यो रिपोर्ट मा छैन, बीमा बिना। र सबै आवश्यक आत्म-सेवा को लागि "निजी 24" सिस्टम जडान (- बिल्कुल मुक्त यसलाई साँच्चै आवश्यकता हो, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, बस भन्दा सान्दर्भिक सूची वरिपरि कुरा हो)।
तर "निजी" मात्र प्रत्येक उत्पादन संग आपूर्ति गरियो कुनै पनि बैंक ग्राहक गर्न एकीकृत मान्छे को सेवा गर्न उपयुक्त हुन्छ। देश को ब्याटन र अन्य वित्तीय संस्थाहरू टिप्न। उदाहरणका लागि, "Ukrsotsbank", ग्राहक-बैंक पनि एकदम प्रयोग गर्न सजिलो छ र आवश्यकता पनि गएको छ, "UkrSib" जो उहाँबाट टाढा छैन ग्राहकहरु 'जटिल' सेवाहरूमा बेच्न थाले, तर बाँकी टाढा पछि छैनन्।
यो सिर्फ बाहिर जाने र एक मात्र साँच्चै आवश्यक सेवा, त्यसैले सरल छैन कार्यान्वयन भनेर बाहिर जान्छ। कुनै पनि कार्यालयमा कल बैंक (निश्चित वा नयाँ) को हरेक ग्राहक, यो मुद्दा एक विशेष उत्पादन कुनै प्यारा बालिका जबरजस्ती गर्न सक्दैनन् भनेर बुझ्न पर्छ किन कि हो। र सबै उहाँले सम्झौता साइन इन गर्न, र स्वेच्छाले सेवाहरूको कार्यान्वयन गर्न सहमत छ।
प्रकार र विशेषताहरु: को बैंकहरू विदेशी मुद्रा कारोबार
2014 मा रूसी बैंकहरू को दर्जा के हो?
वास्तवमा केन्द्रीय बैंक रिपोर्ट?
21 औं शताब्दी मा विश्वसनीयता बैंकिंग र वित्त
को महाधमनी, को aortic शाखा: विवरण र फोटो
हवाई अड्डा कीव - "Boryspil": उडान जानकारी। विमानस्थलमा प्राप्त गर्न कसरी
मर्सिडीज एसएलएस: समीक्षाहरु, तकनीकी विनिर्देशहरु
ओक सिढी को विकल्प धेरै बुद्धिमानी निर्णय हो
कुकुर लागि पिंजरे - एक लक्जरी वा आवश्यकता?